Inkampani yaseChina isolwa ngokushaya abakuleli ngesithende - Ilanga News
Home Izindaba Inkampani yaseChina isolwa ngokushaya abakuleli ngesithende
Inkampani yaseChina isolwa ngokushaya abakuleli ngesithende
UMnyango wezeMisebenzi neziSebenzi usulufake enkantolo udaba
ISIQUBULE intukuthelo kwabanye abantu baseNingizimu Afrika indaba yokuthi inkampani enkulukazi yomakhalekhukhwini, yaseChina, iHuawei, ibashaya ngesithende abakuleli ezikhundleni eziphezulu, iqashe abokufika abalinganiselwa ku-90%. Umsindo uqubuke emuva kokuba uMnyango wezeMisebenzi nezeZisebenzi uveze ukuthi ngoLwesihlanu ufake amaphepha enkantolo, umangalela iHuawei Technologies South Africa ngokwephula umgomo obizwa nge Employment Equity Policy (EAP), olawula indlela izinkampani eziqasha ngayo izisebenzi.
Kubikwa ukuthi ocwaningweni lwamabhuku olwenziwa ngo-2020, kwatholakala ukuthi le nkampani yenza okuphambene ne-EAP. Umnyango uthi uphiko lwezomthetho lwale nkampani lwazama ukuxhumana nawo, lufuna ukuba kuxoxwe ngenhloso yokuthola isixazululo. Kubikwa ukuthi ngesikhathi ibuzwa le nkampani ngokuqasha isibalo esilinganiselwa ku-90% wabantu abavela kwamanye amazwe, ithe yanikwa imvume wuMnyango wezaseKhaya.
UMnyango wezemi Sebenzi nezeZisebenzi, uthi ube sewenza uphenyo ubambisene noMnyango wezaseKhaya, kwatholakala ukuthi iHuawei yanikwa imvume yokuba iqashe ngendlela ehambisana nemigomo ebekiwe ngaphansi kwe Immigration Regulations, egunyaza ukuba inkampani iqashe u-60% wabantu bakuleli no-40% wabangaphandle. Kubikwa ukuthi ophenyweni olwenziwe ngokuqasha kwale nkampani, kutholakale ukuthi ezikhundleni zabaphathi abaphezulu (top management), iqashe abawu 5, bonke okungebona abase Ningizimu Afrika.
Ku-71 wezikhundla zabaphathi abakhulu (senior management), kwatholakala ukuthi abawu-27 (38%) baqhamuka emazweni angaphandle. Ezisebenzini zale nkampani eziwu-435 ezisezingeni labaneziqu zemfundo ephakeme, kubikwa ukuthi eziwu-378 (87%) ngezangaphandle. Ezisebenzini ezinamakhono (skilled-technical level), eziwu-138 (76%) kweziwu-181 zivela ngaphandle kwakuleli. Kutholakale ukuthi iqashe umuntu oyedwa kulowo msebenzi ongadingi ikhono elitheni (semi-skilled), kanti naye ngowangaphandle kwakuleli.
ILANGA lithumele imibuzo ngobhalonyazi (e-mail) kokhulumela iHuawei, uVanashree Govender, kodwa kwashaya isikhathi sokuloba impendulo ingakatholakali. UMnyango wezeMisebenzi nezeziSebenzi usuxwayise nezinye izinkampani ezingalandeli umthetho nemigomo ebekiwe ngokuthi kukhona okusina kuzijeqeza. Kuvela lokhu nje, inkulu impi yemisebenzi elwiwa ngabantu baseNingizimu Afrika, abakhala ngokuthi izinkampani zibashaya indiva, ziqasha abokufika.
Previous articleSITHOLAKALE EDANYINI ISIDUMBU SOBETHUNJIWE
Next articleBathembisa ukugcoba owabo abamelene neSilo uMisuzulu